About Us - Changteng Import sy Export Co., Ltd.
Vozon'akanjoko sy ny Leash
bika aman'endrika Tools
Vozon'akanjoko Leash fiadiana
Dog Mateza Toy
Dog tady Toy
Dog TPR fingotra LaTeX Toy
Nylon Collar Leash fiadiana
Orthoganic Natural fofona Control
Bed Pet lafika Mat
BONZERPET dia naorina teo an 2017. Ny orinasa no misy ao Hangzhou, adiny roa 'fiara avy any Shanghai sy Ningbo seranan-tsambo. Nanomboka teo, foana izahay misahana ny famokarana isan-karazany ny biby fiompy vokatra. Ary efa nahavita ny fitomboana haingana eo amin'ny raharaham-barotra ankehitriny biby.
Ny tena vokatra dia hita pet fandriana, akanjo biby fiompy, biby kilalao sy ny saka hazo ao amin 'ny orinasa. Ankehitriny dia efa 100 mahery mpiasa sy 6000 metatra toradroa faritra. Ny famokarana fahaizany tonga 50pcs 40ft fitoeran isam-bolana. Tamin'ny fomba hafa koa isika, manao ny varotra koa ny raharaham-barotra isan-karazany ny biby fiompy hafa vokatra. Anisan'ny biby izy ireo vozon'akanjoko & leashes, borosy biby fiompy, biby feeders, saka kilalao, kely Accessories biby, vorona sy ny trondro Accessories.
Tsara Quality, fanompoana tsara, tsara vidiny sy ny voninahitra tsara ny raharaham-barotra no fitsipika. Base amin'izany, ny vokatra namidy ho any Amerika Avaratra, Eoropa, Azia sy Aostralia .Moreover, izahay dia nifaly tsara laza amin'izao barotra. Fa fampivelarana bebe kokoa ny antitra raharaham-barotra sy mpanjifa vaovao, dia ho nampitoetra ny eny ifotony sy ny famolavolana ny ho an'ny sampan-draharahan'ny biby vaovao entana amin'ny isan'andro.
Ny tanjona dia ny mba ho izao tontolo izao kilasy mpamatsy mba WOLD kilasy mpanjifa sy ny mihoatra ny mpanjifa ny expections amin'ny kalitao, fandraisana sy ny vidiny amin'ny alalan'ny fanatsarana mitohy sy ny mpanjifa fifandraisana.
4-3709, Huayuan Mansion, Linping, Hangzhou, ZJ, Sina